बिहान खाली पेटमा पानी पिउनुहोस्, यस्ता छन् फाइदै फाइदा « Lokpath
काठमाडौं । तपाई कत्तिको पानी पिउनुहुन्छ ? पानी मानव शरीरका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । पानी बिनाको जीवन कल्पना समेत गर्न सकिन्न । मानव शरीरमा करिब ७० प्रतिशत पानी हुने गर्छ ।
शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त बनाइराख्न पानीको पनि अहम भूमिका रहन्छ । त्यसैले समय समयमा पानी पिउनुपर्छ । कतिपय व्यक्तिहरु बिहान पानी खान डराउँछन् । बिहान पानी खाँदा असहज महसुस गर्छन् । बिहान पानी खाँदा सुरुमा वाकवाकी लाग्ने, असहज भए जस्तो महसुस भएजस्तो पनि हुने गर्छ । तर बिहान दिनहुँ पानी पिउने हो भने यो समस्या आफैँ हाल भएर जान्छ ।
बिहान उठ्नेबित्तिकै खाली पेटमा पानी पिउँदा स्वास्थ्यलाई भरपुर फाइदा मिल्छ । त्यसैले बिहान उठ्नेबित्तिकै मनतातो पानी पिउने गर्नुपर्छ ।
बिहान खाली पानी पिउँदा केके फाइदा हुन्छ ? यसबारे हामी जानकारी दिँदैछौँ ।
-मोटोपनाको समस्या हटेर जान्छ ।
-कब्जियतको समस्यालाई दूर बनाउँछ ।
-खाना रुचाउँछ ।
-पाचन प्रणालीमा सघाउ पुर्याउँछ ।
-छालालाई सफा बनाउँछ ।
-मांशपेशीलाई तन्दुरुस्त बनाउन यसले सहयोग गर्दछ ।
-एसिडिटीको समस्या कम हुन्छ ।
-टाउको दुख्नबाट बचाउँछ ।
-रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ ।
-बिहानै उठेर पानी पिउँदा शरीरको रगत समेत सफा हुन्छ ।
सामान्य व्यक्तिले (पुरूष या महिला ) दिनमा दुई देखि तीन लिटर पानी पिउनुपर्ने हुन्छ। तर यो एकै चोटी पिउनु हुँदैन। यसको लागि यही समय भन्ने पनि छैन। अथवा सबैले यही नै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर पिसाब पहेँलो हुनुहुँदैन। पिसाब पोल्ने, गन्हाउने, कलर बदलिने भएमा पानी नपुगेको संकेत पनि हुनसक्छ । तिर्खा लागिहाल्यो भने एकछिनपछि भनेर बस्नुभएन ।
प्रकाशित मिति: २०७८,आश्विन,९,शनिवार ११:३०